Shina Mini Humidifier, Mini Usb Humidifier, Mini Air Humidifier Mpanamboatra sy mpamatsy
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Description:Mini Humidifier,Mini Usb Humidifier,Mini Air Humidifier,Mini Cool Mist Humidifier,,
Ny vokatra avy amin'ny Mini Humidifier , mpanofana manokana avy any Shina, Mini Humidifier , Mini Usb Humidifier mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Mini Air Humidifier R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Mini Humidifier miaraka amin'ny Led Light Oils Spaces kely
Vaovao Tsara indrindra portable Ultrasonic Cool Mist Humidifier
Mini Humidifier Spray Aromatherapy ho an'ny fiara
Mini Humidifier Usb Car Humidifier amin'ny fitsangatsanganana
Goavam-bolo mahery vaika tsara elektrika Mist Humidifier
Mini Humidifier Export mankany Uk Canada Ireland
Mini Humidifier Tsy misy sivana miaraka amin'ny fametahana mpankafy
Mini Humidifier Feno alahelo Portable Wood Grain Humidifier
Mini Humidifier momba ny vokatra mahazatra amin'ny Target Walmart Amazon
PP ABS Mini Fanomezana Hafaliana ho an'ny Ankizy Ankizy
Mahafinaritra Mini Humidifier ho an'ny Desk
100ML Mini Humidifiers ho an'ny efitrano fatoriana
Ultrasonic Cool Mist Humidifier Walmart diffuser Amin'ny menaka
Amidio amin'ny Amazon 150 ml Aroma Oil diffuser
Amazon Manjarena tena tsara amin'ny menaka Aroma diffuser 150ml
Fanadiovana rivotra fitaterana an-tsambo any Amazon
Mini Aromaterapy fiara Ultrasonic Aroma Humidifier
Air Humidifier ho an'ny fiara tsy fahampian'ny rano amin'ny herinaratra
Mini Humidifier miaraka amin'ny Led Light Oils Spaces kely 2019 Modely Vaovao Miarina Io diffuser menaka io dia feno hanitra mahafatifaty izay manetsika ny hatezerana, adin-tsaina ary adin-tsaina mandreraka, tonga lafatra ho an'ny setroka feno setroka sy fofona biby, voahodidin'ny menaka manitra ho...
Vaovao Tsara indrindra portable Ultrasonic Cool Mist Humidifier Toetoetra: Mist mangatsiatsiaka, Aromaterapy, diffuser menaka manitra Fotoana azo anaovana adiny 1, 3 ora, na avela fotsiny. Fitiavana 7 loko hisafidianana mba hifanaraka amin'ny toe-piainana na firavaka! Mihidy fiara rehefa mihhena ny rano...
Vidin'ny singa: USD 7.08 - 7.69 / Piece/Pieces
Mini Humidifier Aroma Digital Aroma Humidifier Milamina er enjoying ny mpiara-manitra Afak'omaly mangatsiaka, boky iray, hira, ary zava-manitra mametaveta Avelao ny asanao, avelao hihena ny fihenan-tsakafo aromaterapy amin'ny alina mangina, ho torimaso moramora, ny nofy mandentika hanitra fofona dia mety ho...
Vidin'ny singa: USD 10 - 9.69 / Piece/Pieces
Mini Humidifier Spray Aromatherapy ho an'ny fiara Ity USB Aroma Essential Oil diffuser Ultrasonic Cool Mist Humidifier dia manana fanavaozana ultrasonic fa ny humidifier ultrasonic dia manome fofona malefaka ary fofona mahafinaritra ahafahana mampitony, tontolo milamina, manamando ny rivotra manampy amin'ny...
Mini Humidifier Usb Car Humidifier amin'ny fitsangatsanganana Ny rivo-piainana romantika misy jiro marevaka, ny moisturizing, ny aromatherapy, ny jiro miorina, ny fanovana miovaova loko, ny fiovana amin'ny sitrapo, ny fikarakarana ny hoditra, avelao ampio ny tantaram-pitiavana ny fiainana. Tsy misy jiro ary...
Eco Mini Humidifier Home Air Conditioner Humidifiers Ity diffuser ny hanitra ultrasonic ity dia mpanamaso menaka tena ilaina amin'ny taranaka faharoa izay mamoaka fofona sy fofona mahery noho ireo modely teo aloha. Ultrasonic diffuser no fomba tsara indrindra manampy ny hanitra masina eo amin'ny efitranonao,...
Goavam-bolo mahery vaika tsara milina Mini Mist Humidifier Mandany fotoana be ao amin'ny fiaranay sy amin'ny solosaina ... maninona raha manadio ny rivotra sy mitroka tsara amin'ny Aroma diffuser! Ny diffuser menaka Aroma dia manome fiasa tokana 5-in-1 tsy manam-paharoa - an'ny diffuser fofona,...
Mini Humidifier Export mankany Uk Canada Ireland Inona no tena menaka manitra? Ny diffuser solika dia fitaovana kely mandefa ireo singa tsy ilaina solika ao anaty rivotra. Mini diffuser no fomba tena tianao amin'ny fanadiovana ny rivotra. Rehefa mifoka rivotra malemy avy amin'ny menaka manitra isika, dia...
Vidin'ny singa: USD 10 - 9.23 / Piece/Pieces
Mini Humidifier Tsy misy sivana miaraka amin'ny fametahana mpankafy Manamory: hamandoana ny rivotra eny amin'ny efi-trano mandritra ny fahavaratra sy ny ririnina, mamelombelona ny kalitaon'ny rivotra atosinay, manitsy ny hafanana ao anaty efitrano. Hatsarana: mamofom-bolo ny fofona mamelombelona ary azo...
Mini Humidifier Feno alahelo Portable Wood Grain Humidifier Ny humidifier usb dia mampiditra ny hamandoana amin'ny rivotra mba hisorohana ny maina izay mety hiteraka tsy fahita amin'ny faritra maro amin'ny vatana. Ny fanamainty mini dia mety ho mahomby amin'ny fitsaboana ny fahamaizana amin'ny...
Mini Humidifier momba ny vokatra mahazatra amin'ny Target Walmart Amazon Famolavolana mahatalanjona bebe kokoa Ny famoronana plastika fotsy dia mahatonga ny plastika diffuser ambony, toa tsara tarehy ary tonga lafatra amin'ny haingo rehetra. Ampiasao toy ny haingon-trano natao hamoronana toerana tokana....
PP ABS Mini Fanomezana Hafaliana ho an'ny Ankizy Ankizy Ranon-tsavonavona vaventy! Amin'ny hazavana mamirapiratra dia manome fahatokiana tanteraka Ny teknolojia farany farany atomisma Ny efitranonao dia feno ny hanitra mahafinaritra an'i Lavender (Na misy fofona nofidinao) Apetraho anaty rano ao anaty rano...
Mahafinaritra Mini Humidifier ho an'ny Desk Azo antoka ny diffuser ultrasonic aromaterapy tsy misy hafanana Ny fofona manitra dia mampiasa ny teknolojia ultrasonic izay ny diffuser ultrasonic dia manome traikefa azo antoka sy tsy misy hafanana ary mbola mamoaka fofona voajanahary faran'izay malefaka hanatsara...
100ML Mini Humidifiers ho an'ny efitrano fatoriana Miezaha mafy handoka ny tenanao amin'ny tombony rehetra amin'ny menaka manan-danja ao anaty plastika iray tsara tarehy sy tsara tarehy. Ny fametrahana tonga lafatra amin'ny akanjo vita amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ahafahanao manelingelina...
Ultrasonic Cool Mist Humidifier Walmart diffuser Amin'ny menaka Mifanojo tsara ny aromatherapy bestie! Amin'ny fametahana bokotra iray amin'ny Ultrasonic Aroma diffuser sy ny rano indray mitete ny menaka ilaina amin'ny dituo tena tianao, dia afaka mamorona fofona manitra farany ao amin'ny biraonao...
Amidio amin'ny Amazon 150 ml Aroma Oil diffuser -Ny Ultrasonic Essential Oil diffuser dia karazana diffuser manitra izay manaiky ny teknôlôjia ultrasonika izay afaka miasa mangina miaraka amin'ny feo kely. Afaka mitazona fampisehoana tsy misy tohatra izany nefa ianao matory. -Manao fitaovana avo lenta,...
Amazon Manjarena tena tsara amin'ny menaka Aroma diffuser 150ml Ity multifunctional mini humidifier ity dia azo ampiasaina ho toy ny hanitra fofona, moistifier ary hazavana mamirapiratra LED. Ny fiasan'ny fofona ultrasonic manitra dia ahafahanao mankafy ny rivotra manaitra sy ny menaka manitra ankafizinao izay...
Fonosana: Boaty anatiny: 110 * 110 * 210mm; Carton master: 455 * 345 * 440mm / 24PCS
Fanadiovana rivotra fitaterana an-tsambo any Amazon 7 Fanovana jiro miovaova: Plectus diffuser dia manana jiro fanovana loko 7 amin'ny safidinao. Afaka manantona ny bokotra Light ianao hanitsiana ny jiro LED 7 (miorina amin'ny loko / miovaova ). Ny tsirairay amin'izy ireo dia azo ampifanarahana eo...
Mampitony hazavana Mini Aroma diffuser Usb Car 50ml Dituo dia mahomby amin'ny fiara miaro tena menaka fanalefahana anaty vokatra BPA 100 isan-jato. Ity no fomba tsara indrindra amin'ny fitazonana ny hamandoana, tsy misy fofona sy zava-boankazo ao anaty fiaranao. Amin'ny maha-diffuser USB anao dia mora ny...
Air Humidifier ho an'ny fiara tsy fahampian'ny rano amin'ny herinaratra Avereno any an-tsokosoko ny fiaran-tarehinao (AROMATHERAPY OASIS): Avereno ny sainao, ny vatanao ary ny fanahinao ary avereno ny habakao ao anaty atiny ho lasa aromaterapy mahafinaritra izay manaitra sy manaitra ny sainao. Ny tonga...
Mini Wood Grain Ultrasonic Aroma Air Humidifier Ity Essence Oil diffuser ity dia azo antoka fa hahafinaritra ny fahatsapan-kevitry ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra ary ho avy maro! Ny loko 7 miova jiro LED ary ny zavona ultrasonic dia mivoaka ny vava mamoaka. Ity famafazana varimbazaha kitay ity dia maharitra...
Shina Mini Humidifier mpamatsy
Mini Air Mist Usb Air Humidifier
Mini Humidifier dia mpandrafitra endrika vaoritra misy endrika maivana sy compact. Miaraka amin'ny teknolojia ultrasonic, amboarina ny manodidina anao amin'ny alàlan'ny famokarana havona mangatsiaka mba hanondrahana ny hamandoana ary hanamaivana ny fihenjanana. Mety amin'ny fiara, biraonao, efitrano fatoriana, efitrano fianarana, efitrano fisakafoana, efitrano fandraisan'ny ankizy sy ny maro hafa.
Mini cool Mist Humidifier: Namboarina amin'ny takelaka atomizer avo lenta. Mampiasa teknolojia ultrasonic izy io mba hivezivezy sy hanjavona ny rano ao anaty molekiola mangatsiatsiaka nano-kilasy tsara, izay afaka mametaka haingana ny hodiny ary manamaivana ny hoditra maina.
Famolavola ho an'ny mpampiasa: Maivana sy mangarahara, ity mpandoto rivotra ity dia afaka mitazona rano hatramin'ny 80ml ary hamandoana ny hamandoana 25 ml isan'ora. Na ny motera lehibe sy ny kapoaky ny rano dia azo kitahina, mora diovina ary ampiasaina.
Mangentana mangingina: manome takelaka malefaka sy tsy miovaova ny takelaka ataon'ireo singa milamina. Ny famoronana mangina sy miala sasatra (latsaky ny 35dB). Ny fanjanana kely sy ny tabataba ambany dia tonga lafatra amin'ny fotoana fatoriana na fotoana famakiana. Miezaha mangina nefa tsy miteraka korontana.
Azo antoka sy azo itokisana: Miaraka amin'ny sensor amin'ny haavon'ny rano, ny mini usb moistifier dia hivoaka mandeha ho azy raha tsy ambany ny haavon'ny rano noho ny haavon'ny rano azo antoka. Mifanaraka amin'ireo loharanom-pahefana USB (mpanamboatra herinaratra AC, mpanamboatra fiara, solosaina finday / ordinatera, na banky herinaratra), manerantany sy mety. Voaro amin'ny alàlan'ny fampidirana 5V ambany.